Xog : Jawaari Oo La Oggolaysiiyay In Baarlamaanku La Geeyo Mooshin Ka Dhan ah Qadar iyo Farmaajo Oo Wax Ka Og. – Hornafrik Media Network
Madaxweyne Xasan Sheikh oo ka war bixiyey kulankii ay Farmaajo kula yeesheen Villa…
Xog : Jawaari Oo La Oggolaysiiyay In Baarlamaanku La Geeyo Mooshin Ka Dhan ah Qadar iyo Farmaajo Oo Wax Ka Og.
Tan iyo Markii uu Madaxwayne Farmaajo ka soo laabtay Boqortooyadda Sucuudiga waxaa isi soo tarayay Shaki ah in Somalia ay badali doonto Mawqifkeeda ku aadan Arrimaha Khaliijka.
HornAfrik waxay dabagal ku samaysay wixii ay ka wada hadleen Somalia iyo Sucuudiga iyo Halka ay Somalia u socoto, Waxaana aan la hadalnay Diblomaasiyiin Labada Dowladood ah, kuwaasoo nala wadaagay Qodobadda ay sida Hoose Somalia iyo Sucuudiga ugu heshiiyeen oo kala ah:-
1-Madaxwaynaha Somalia waxa uu codsaday in arrinta Khilaafka Khaliijka la marsiiyo Baarlamaanka si ay halkaas uga timaado in Somalia ay badasho Mowqifkeeda, Maadama ay isaga ceeb ku tahay inuu badalo Mowqifkiisii hore.
2-In la abaabulo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia inay keenaan Mooshin ay ku dalbanayaan in Xiriirka loo jaro Qadar.
3-In Guddoonka Baarlamaanka uu Mooshinkaasi dadajiyo marka uu soo gaaro, qaybna ka qaato u ololaynta in Mooshinkaasi helo Cod Aqlabiyad leh.
4- In La Joojiyo Mooshinka ka dhanka ah Imaaraadka Carabta oo ay wadaan Xildhibaano ka tirsan Baarlaamka Somalia.
Si Heshiiskaasi u hirgalo waxaa loo xilsaaray Dowladda Masar inay ka dulaalayso, Waxaana Masar loo idmay inay ka shaqayso in Guddoonka Baarlamaanka arrintan laga dhaadhiciyo, iyadoo arrintaasi ka duulaysa Masar waxay martiqaaday Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia, Maxamad Cusmaan Jawaari oo la oggolaysiiyay Qodobadan:-
1- Inuu Joojiyo Mooshinka ka dhanka ah Imaaraadka.
2-Inuu ka qayb qaato in Mooshin laga keeno Qadar.
3-Mooshinka ka dhanka ah Qadar marka uu qabto inuu soo dadajiyo in Baarlamaanka looga doodo.
4-Inuu ka shaqeeyo in Baarlamaanku Cod Aqlabiyad leh ku dalbdaaan in Xiriirka loo jaro Qadar.
5-In Isbahaysiga Sucuudiga iyo Imaaraadka oo ay Masar Wakiil ka tahay bixiyaan Lacag dhan 20 Milyan oo Dollar oo lagu kala gadayo Baarlamaanka,
6-In Gudoonka Baarlamaanka la siiyo 10 Milyan oo Dollar oo qayb ka mida hadda loo hormariyay.
Somalia waxay horay u qaadatay Mowqif Dhexdhexaadnimo ah arrinta Khaliijka, kaas oo marka dhinac kale laga eego u muuqan karay inay la safatay Qadar oo ay fasaxday Hawadeeda inay isticmaalaan Diyaaradaha Qatar Airways, balse Madaxwayne Farmaajo oo tan iyo wixii waqtigaasi ka dambeeyay dareemayay Culays Siyaasadeed, Isla markaana ay ka ka hor yimaadeen Dowladiisa dhamaan Dowlad Goboleedyadda Xubnaha ka ah, iyo Siyaasiyiin Miisaan ku leh Dalka ayaa aqbalay inuu badalo Mowqifkiisa, isagoona marsiinaya Baarlamaanka si uu isaga leexayo in isaga ay ku noqoto Fadeexad kala hadalkiisa.
Warsaxaafadeed ay soo saartay Xukuumadda Khayre waxay ku bogaadiyeen Sucuudiga Deeq Lacageed oo gaaraysa 50 Milyar oo Dollar oo ay ku taageereen Somalia, balse aan la cadayn waxa lagu qabanayo, Waxaan sidoo kale shaki sii abuuraysa in Lacagtaasi la sheegay Maalmo kadib markii uu Madaxwaynuhu ka soo laabtay Sucuudiga, iyadoona Caadiyan Deeqa Dowladuhu ay bixiyaan Kulamadooda kadib la shaaciyo.
Turkiga oo Xiriir la leh Qadar, isla markaana ku cadaadinaya Somalia inaysan badalin Mowqifkeeda waxay hoos u dhigtay Dowladda Federaalka ah si aan la shaacin Xiriirkii ay la lahayd, Waxaana Madaxwaynaha oo ah Taliyaha Ciidamadda Qalabka Sidda uu ka baaqsaday Furitaanka Saldhiga Milatari ee ugu waynaa ee ay Turkidu ka furtaan Somalia. Waxaa sidoo kale la billaabay Dacaayado ka dhan ah Turkida oo ay ka mid tahay in la xiray Askari ka tirsan Illaaladooda, iyo Baabuur ay leeyihiin, kuwaasooo lagu eedeeyay inay Weerareen Gaariga Gudoonmiyaha Haweenka Qaranka, gaysteena Dilal.
Somalia Oo Aan Ka Hadlin Weerarkii Bariire, Cambaaraysana Weerarkii Las Vegas.